CNC Series Factory - China CNC Series ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Multifunction ZNC Sinker EDM Machine 580mm Max Distance သည်မှိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်
Model: CNC540 Table Travel: 500 * 400 * 200mm Model အမျိုးအစား - CNC EDM စက်အရွယ်အစားရေနံကွန်တိန်နာ - 1300 * 720 * 450mm စားပွဲတင်အရွယ် - 800 * 400mm Max ။ Eletrode Head ၏အလေးချိန် - 150kgs Precision Spark တိုက်စားမှု ZNC CNC EDM မှိုပြုပြင်သော CNC 540 မှအမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော 1. အမျိုးမျိုးသောစက်နည်းလမ်းများ။ 2. အောက်ခြေကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက် - စက်သည်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုရောက်ရှိသောအခါ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစက်ဖြစ်စဉ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ၃။ အလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ ညှိခြင်းနှင့်ညှိခြင်း ...
700 * 400mm စားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား CNC EDM စက်၊ တည်ငြိမ်မှု CNC Sinker EDM စက် CNC450
လျှပ်ကူးပစ္စည်းခေါင်း: 280mm မော်ဒယ်: CNC450 စားပွဲတင်ခရီးသွား: 450 * 350 * 200mm အရောင်: Optional ပုံစံအမျိုးအစား: CNC EDM ရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား: 1100 * 710 * 450 မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော ZNC540 လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးစက် 1. 1. တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့သည်။ 1. မြင့်မားသောအနေအထားကိုအာမခံချက် - သေခြင်း၊ တူးခြင်းသို့မဟုတ်ပျင်းခြင်းစသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ကိရိယာများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်း 4.Wider range - တူးဖော်ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊
မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု CNC EDM စက်, 650L Filter ကွန်တိန်နာ Cude EDM Spark စက်
Model: CNC1680N စားပွဲတင်ခရီးသွားခြင်း - 1600 * 800 * 500mm ရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား - 2550 * 1500 * 560mm စားပွဲတင်အရွယ် - 1700 * 1000mm Max ။ Eletrode Head ၏လေးလံမှု - ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်အလေး - ၉၀၀၀ ကီလိုဂရမ် ၁၀၀ * ၆၀၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာစားပွဲခရီးသည် CNC 1060N မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်သောစက် \_ t၁၁ ။ အတွင်းပိုင်း servo အိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းသည် PCB ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ သက်တမ်းရှည်စေခြင်း၊ ၂။ မြန်နှုန်းမြင့်သောပြုပြင်ခြင်းနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနည်းသော MOSFET လျှပ်စီးပတ်လမ်းကိုလက်ခံပါ။ ၃။ ပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော PC ...